Detoronomy 6 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 6
Ny fitiavana an'Andriamanitra, hàny hahazoan'Israely fiadanana.
1Izao no lalàna sy didy amam-pitsìpika nasain'ny Tompo Andriamanitrareo hampianarina anareo, mba harahinareo any amin'ny tany halehanareo mba hakanareo azy ho fanananareo; 2mba hatahoranao an'ny Tompo Andriamanitrao, hianao sy ny zanakao ary ny zanaky ny zanakao, ka hitandrina ny didy aman-dalàny rehetra nandidiako anao hianao, amin'ny andro rehetra hiainanao, ka hohalavaina ny andronao. 3Koa henoy izany, ry Israely, ary mitandrema ny mba hanatanteraka izany, mba ho sambatra sy hitombo isa be hianao, any amin'ny tany tondra-dronono aman-tantely; araka ny nolazain'ny Tompo Andriamanitry ny razanao anao.
4Mihainoa, ry Israely: Iaveh Andriamanitsika, dia izy ihany no Iaveh. 5Tiàva an'ny Tompo Andriamanitrao, amin'ny fonao rehetra sy amin'ny fanahinao rehetra. 6Aoka ho ao am-ponao izao didy omeko anao anio izao. 7Alatsaho ao an-tsain'ny zanakao izany; ary resaho, na ao an-tranonao hianao, na eny amin'ny dia alehanao, na mandry hianao, na hiarina. 8Afehezo amin'ny tànanao izany, mba ho famantarana ho anao, ary ataovy toy ny fehin-kandrina eo anelanelan'ny masonao. 9Soraty eo amin'ny tolàm-baravaranao izy, sy eo amin'ny vavahadinao.
10Raha avy izay hahatafidiran'ny Tompo Andriamanitrao anao any amin'ny tany nianianany tamin'i Abrahama sy Isaaka ary Jakoba razanao, homena anao, tanàna sady soa no lehibe, tsy naorinao; 11trano feno zava-tsoa isan-karazany, tsy nofenoinao; dobo famorian-drano, tsy nolavahanao, voaloboka amam-pototr'oliva, tsy nambolenao, dia hihinana sy hivoky hianao; 12ka tandremo fandrao manadino an'ny Tompo izay nampivoaka anao avy tany amin'ny tany Ejipta, tany amin'ny trano fanandevozana. 13Matahora an'ny Tompo Andriamanitrao, manompoa azy, ary aoka ny anarany no hianiananao. 14Aza manaraka andriamani-kafa, amin'izay andriamanitry ny firenena hanodidina anareo. 15Fa Iaveh Andriamanitrao, izay eo afovoanao, dia Andriamanitra saro-piaro, ka dia hirehetan'ny fahatezeran'ny Tompo Andriamanitrao hianao, sy fongorany eto ambonin'ny tany.
16Aza maka fanahy an'ny Tompo Andriamanitrareo, tahaka ny nakanareo fanahy azy tany Masah. 17Tandremo tsara ny didin'ny Tompo Andriamanitrareo, ny lalàna amam-pitsìpika nandidiany anareo. 18Ny mahitsy sy tsara eo imason'ny Tompo no ataovy, mba ho sambatra hianao sy hiditra ao amin'ny tany soa izay nampanantenain'ny Tompo ny razanao tamim-pianianana mba hanananao azy, 19rehefa voaroakany eo anoloanao, araka ny voalazan'ny Tompo, ny fahavalonao.
20Raha manontany anao ny zanakao, indray andro any, manao hoe: Ahoana moa ny amin'ireo didy sy lalàna amam-pitsìpika nandidian'ny Tompo Andriamanitsika anareo ireo? 21dia lazao amin'ny zanakao hoe: Andevon'i Faraona tany Ejipta izahay; ary tànana mahery no nitondran'ny Tompo anay nivoaka avy tany Ejipta; 22fahagagana amam-pamantarana lehibe sy mandoza no nataon'ny Tompo, namelezany an'i Ejipta sy Faraona mbamin'ny ankohonany rehetra teo imasonay; 23ka izy no nampivoaka anay avy tany, dia ny mba hitondrany anay amin'ny nampanantenainy ny razantsika tamim-pianianana, 24ary Iaveh nandidy antsika hanaraka izany didy rehetra izany, sy hatahotra an'ny Tompo Andriamanitsika mba ho sambatra mandrakariva isika, sy hitahirizany antsika ho velona, araka izao ankehitriny izao. 25Ho fahamarinana ho antsika izany, raha mitandrina hanaraka ireo didy rehetra ireo isika eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitsika, araka ny nandidiany antsika. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0234 seconds